Nephesch TA'AN • rapgasy.mg
Iza moa izany hoe Nephesch TA’AN, dia inona ny tantarany?
Izaho dia nomena anarana hoe RANOARIVONY Barianja, ary teraka tamin’ny 21 aogositra 1985 raha misy liana.
Olona iray manana lafy maro mifameno aho, fa aty amin’ny Rap aho antsoy hoe Nephesch TA’AN.
Efa nandalo anarana maro aho tamin’ity Rap ity, arakaraka ny toetrako amin’iny vanim-potoana iny. Ohatra hoe tamin’ny nanomboka nanao Rap aho dia hoe B.Styx, nalaiko avy amin’ny “B” fiandohan’ny fanampin’anarako sy ny hoe “Styx” ilay renirano mihodidina im-pito ny helo, araka ny angano grika, izay nanatsobohan’ny renin’i Achilles azy fony izy zazakely ka nahatonga azy ho mafy be iny. Fa teo ihany koa ny hoe Beast X (ilay fanononana ny B.Styx), nalaiko avy tamin’ny hevitra “ilay bibi-dia mbola tsy hay hoe inona”.
Satria tamin’izany tena somary bibibiby fanoratra mihitsy e! Avy eo koa nisy ilay hoe Dmor-B, izay nalaiko avy amin’ny hoe “Morbide” avadika (dmorbi) sy kilalaon-teny ahafahana maneho ilay litera “B” amin’ny fanampin’anarako, izay toetra nentin’ny hafa namaritana ahy fony aho mbola tsy nampiasa io anarana io akory.
Dia nampiana kely hoe TA’AN io Dmor-B taty aoriana. Dia ankehitriny io hoe Nephesch TA’AN io, avy amin’ny hoe “Nephesch”, izay teny hebreo ilazana ny hoe fofon’aina na “âme” na “souffle de vie” na koa ilay lazain’ny malagasy hoe “fanahy maha-olona”, izay adika amin’ny teny anglisy hoe “soul” satria mpanao Soul sy Neo-Soul ny tenako, sy ny TA’AN izay fanafohezana ny hoe TAFIK’ANDRIAMANITRA, raha toa ka TANGALAN’ANDRIAMANITRA io teo aloha. Nafoiko mihitsy aloha ilay “B” hoatao anaty anarana fa aleo mba tsy misy idirany indray!
Lazain’ny reniko fa tamin’ny taona 1989 hono aho, vao naheno Rap, dia efa tia Rap saingy ny tena tsaroako dia ny tamin’ny taona 1991 sy 1992, ary nanomboka teo dia nitakosona tamin’ny kolontsaina HIP HOP noho ireo zoky (zoky vavy, cousins, cousines) efa mpitovo ka efa nitia io kolontsaina io ihany koa.
Isan’ny nanatrika ilay hetsika UP THE RAP voalohany aho, teny Manakambahiny, ary saika nandray anjara fa ireo zokiny tao anaty tarika nisy anay no hoe mifaninana amin’io. Dia tonga ny taona 2000, ka tody tamin’ny fanaovana Rap ny tenako.
Nandritra ny 3 taona dia namoron-kira sy nikotrana teny foana, ary ny taona 2003 vao niditra studio nandray feo sy nanao hira hoe nohenoina avy amin’ny CD izany.
Marihiko nefa fa ny volana novambra 2002, efa nifanerasera sy niara-niasa tamin’ny TANGALA CLAN aho, saingy ny taona 2004 vao nirotsaka nihira ho amin’ny anarany, satria izay vao afa-po tamin’ireo Rap mbola tsy metafizika tiako atao, sy vonona tanteraka hanao Rap metafizika tsy misy fangarony.
Torohevitr’i Maintyfotsybe taminay zandry io, saingy izaho irery angamba no nanaraka an’io fa ny ambiny vao nolazaina, tamin’ny 2003, hoe “Hihira ato amin’ny Tangala amin’izay ianareo izany??!” tonga dia nirotsaka.
Dia nanangana ny OTF (Olon’ny Tena Fanahy) izahay, dia sady nandeha irery aho, tahaka ny mahazatra ahy, no manao ny drafitra OTF. Rehefa tonga ny taona 2008, volana janoary, dia niala tao amin’ny TANGALA aho. Tsy nisy disadisa akory, fa resaka fandresen-dahatra fotsiny satria lasa nanao Rap évangélique aho, ary na dia efa nanao izany aza aho nefa mbola tao amin’ny TANGALA, nandritra ny taona 2007, dia nahatsapa aho hoe na hoe ela na ho aingana dia tsy maintsy handeha mafy kokoa aho…
Aza manahy fa ny évangélique dia fitohizan’ny metafizika ihany, raiso fotsiny hoe toy ny mpianatra nandao ny anjerimanontolo aho, rahefa nahavita ny fianarana maha-mpitsabo, ka handeha hitsabo ny marary any amin’ny hôpitaly amin’izay, fa tsy mijanona eny amin’ny anjerimanontolo intsony na dia hoe misy koa ireo mpampianatra satira tsy ny mpianatra ihany no hita eny amin’ny anjerimanontolo.
Dia ny volana may 2008, nanangana ilay vondrona hoe CERTIFIED IN JESUS aho, niaraka tamin’ny namako 4 izay. Tahaka ny fanaoko, sady nandeha irery aho, no tao anaty tarika kely hoe URBAN KWELETH, no sady manao drafitra rodobe miaraka amin’ny mpikambana ao amin’ny vondrona.
Dia rehefa tonga indray ny 2011, dia nandao io vondrona natsangako io aho, noho ny fandresen-dahatra ihany koa, satria hiakatra ambaratonga hafa indray. Dia ankehitriny, mandeha irery na koa miara-miasa amin’i Ndoas vadiko sy S-O-N-AR namanay aho, ao anatin’ilay hoe NSN (fanafohezana ny hoe Nephesch TA’AN + S-O-N-AR + Ndoas).
Satrinay tsy asiana anarana akory ilay fiaraha-miasa, fa noho ny fangatahan’ny olona dia nataonay NSN fotsiny, hahatsotra zavatra.
Inona ny drafitrao ary e?
Ny resaka drafitra, maro. Tsy nolazaiko teo fa nisy koa ireo karazana hetsika maro nandraisako anjara, na be mpahalala na vitsy mpahalala, raha tsy hitanisa fotsiny aho hoe SAGA TANGALA, ONE MIC 2, GIGA EVENT, SERASERAN’NY TANORA, CHRISTIAN MUSIC FESTIVAL…
Eo amin’ny lafiny raki-kira kosa, tsy mbola namoaka anankiray hoe ara-pomba ofisialy aho, nefa kosa manana hira maro, ary ireo dia voatsinjara anaty drafitra raki-kira avokoa. I Dmor-B izao dia nanana tokony ho raki-kira mihitsy, ary mety mbola hoavoaka indray andro any, raha avelan’ny TANGALA CLAN, ahazoako alalana sy tso–drano avy any, satria nisy nifandraisana taminy…
Ny drafitra Nephesch TA’AN kosa, misy maro, nisy maro, fa ny ambarako dia misy iray tokony efa hivoaka ao, ary efa nanomboka nokarakaraiko tamin’ny taona 2010 (nefa misy hira tamin’ny 2007 koa a!), vita tamin’ny 2014 fa mbola tsy nivoaka noho ny antony ara-bola. Tsoriko fa ny ara-bola no matetika olako eo amin’ny lafiny famoahana vokatra.
Niriako ho avoaka tamin’ny 2015, saingy tsy manana ilay vola ampy e!
Ny anaran’io raki-kira io dia “Resa-Pamonjena”, ahitana lohateny 18 sy 3 fanampiny. Ary ny tohin’io raki-kira, efa an-dalana, ankoatra ireo drafitra raki-kira maro mbola any am-pikonokononana any.
Marihiko fa Beatmaker koa ny tenako, ary izaho ihany no manao ny feon-kirako, izy rehetra, ary manao feon-kira ho an’ny olon-kafa koa aho. Isan’ny nanaovako feon-kira izao ny OTF, Buddah El Taga, Maintyfotsybe, fa eo ihany koa S-O-N-AR, Ndoas, Loys’EÏLL, DNT, Metho, CERTIFIED IN JESUS, GI-C (Ry Smy e!), Miora Killah, RZB, Fefy Fiaro, sy ny sisa.
Marina fa tsy fantatr’olona firy io lafiny maha-mpanao feon-kira ahy io, ary tsy mbola nisy tamin’ireny mpanao Rap efa malaza ireny nanaovako feon-kira. Tsy fantany, na koa tsy zakany ve sa hoe tsy mendrika ny lazany? Mananihany aho a!
Misokatra tanteraka ny varavarana raha mila feon-kira e!
Ahoana ny fijerinao ny Rap Gasy?
Ny fijeriko ny Rap gasy… Iny izy iny, iaraha-mahalala fa somary mijaly kely e! Raha afoheziko ny resaka dia hoe ao anatin’ny vanim-potoana “Mitady ny very” izao ny Rap gasy.
Ny resaka fikarohana sy fisongadinana no tena hitako hoe very tao. Ekeko hoe lasa fantatrin’ny olona maro, amin’izay, izany hoe Rap sy hoe Rap gasy. Ny zavatra tsara kosa aloha dia hoe, raha oharina amin’ny teo aloha, dia mahay kokoa izany atao hoe “Flow” ny mpanao Rap gasy. Saingy avy amin’ny fakan-tahaka no nahaizany izany, ary io fakan-tahaka io dia somary tsy fahaizana maka tahaka kokoa, ary eo mihitsy ilay hita hoe misy zavatra very.
Isan’ny very izao dia ny hoe “fond”, ary ny maha-HIP HOP ny Rap koa dia tsy dia hita taratra firy intsony fa lasa tonga dia maka tahaka ny efa zavatra ara-barotra avy any ivelany ilay hoe Rap gasy fa tsy ilay entina manabe sy mampita hafatra tahaka ny teo aloha intsony. Matoa nisy ny very dia nisy koa ny nanary. Ary tsy ny zandry tsy mahalala sy tsy tia mikaroka fototra ihany no diso, fa ireo zoky tsy tazana tampoka nefa tokony hampita fanilo, noho ny asa aman-draharaha sy tsy fahafahana maro samihafa. Lasa miady irery ny zandry ka arak’endrika sisa ny Rap nataony fa tsy ara-pototra firy intsony, afa tsy ireo zandry manan-joky mbola ao anaty Rap na HIP HOP ka afaka nikarakara azy ireo tsara. Izay, raha tsorina, ny fahitako ny Rap gasy.
Ahoana ny fomba fanoratrao, ny style-nao sy ny feeling-nao?
Raha ny tamin’ny andron’i B.Styx dia efa voalazako hoe somary bibibiby fanoratra, nanao “diatribe”, ary niresaka fiaraha-monina amin’ny ankapobeny sy resaka Rap.
I Dmor-B kosa dia nanao metafizika, fa ny hiavahany amin’ny mpiray vondrona aminy dia ilay “morbidité” sy ny resaka “psychanalyse”, miampy ilay “diatribe” toy ny teo aloha, ary rehefa lasa Dmor-B TA’AN dia niampy resaka “évangélique” fa mbola tsy niharihary be io farany io.
I Nephesch TA’AN dia nandova ilay metafizika teo aloha, ary lasa manao Rap évangélique tanteraka, fa mbola ao foana ihany koa ilay “diatribe”. Arakaraka ny zavatra resahina sy ny hafatra tiana ampita ny feon-kira safidiana, ary toy izany koa ny hoe hoatao maivana sy tsotsotra sa hoatao mavesatra sy lalina ny tonon-kira. Taty aoriana, rehefa niala CERTIFIED IN JESUS aho, dia tsy dia any amin’ilay hoe maivana intsony ny fanoratra.
Ny zavatra teo foana kosa nefa, ary isan’ny hamantarana ahy, dia ny maha-sady tsotra sy mivantam-piteny (terre à terre), nefa sady lalin-kevitra ahy. Tsotra ny teny ampiasaiko, nefa sarotra ny zavatra ambarako (abstrait). Indraindray moa izaho mananihany hoe style “Jeet Kune Do” ny Rap ataoko satria tsotra nefa vokatry ny kotrana maro sy fahaiza-manao maro be ao ambadika ao. Indraindray koa aho miteny hoe “Antsoy hoe Donnie Yen an’ny Rap Gasy aho e!”, rehefa mananihany.
Dia ny feeling-ko dia teraka avy amin’ny style nitaizana ahy, toy ny hoe Jazz, mozika latino, Rock, Classique, Soul, sy zavatra maro be. Ary matetika aho manao fampitahana avy amin’ny resaka nahandro na koa hay ady rehefa miresaka amin’ny olona…
Anontanio ange ireo mifanerasera amiko e! Dia zavatra iray lehibe koa. Nanomboka teo amin’ny TANGALA ity.
Miezaka ny manoratra amin’ny teny malagasy tanteraka aho, ary tsy ahitana tenin-jatovo ny teny ampiasaiko amin’ny Rap-ko na dia hoe avy eny amin’ny lalana aza ny Rap fa lasa tiako io fanoratra io, no sady mikolokolo ahy tsy hanadino ny teny Malagasy. Rehefa miresaka aho nefa dia mampiasa tenin-jatovo betsaka.
Inona ary no tanjon’i Nephesch TA’AN amin’ity taranja ity e?
Ny tanjoko dia tsotra. Mampita hafatra, mitondra teny. Izay no antony hanaovako raki-kira fa tsy hoe resaka ara-barotra. Izay no mahatonga ahy ao anatin’ny rafitra “Ambany Tany” na dia tsy tazanareo miaraka amin’ireo hoe Ambany Tany Tafaray aza aho.
Tsy mitovy ny famindranay, satria midadasika io ka samy manana ny lalany, nefa kosa tsy miady izahay satria samy Ambany Tany. Ny ahy ary ampiako hoe “Ambanin’ny Fahasoavana”, ary io ilay fijery mety hoe mahatonga ahy tsy tafaray dia sy voafaoka anaty ilay vondrona sy ny hetsika maro karakarainy, satria tsy ny Ambany Tany no didiko fehy lehibe sy indraindraiko fa ny Andriamanitro sy ny fitarihany.Ilay manao mozika mihitsy koa no tena tiako e! Zanaka mpanao mozika aho.
Aza gaga raha mahita ahy any amin’ny “cabaret” manao “featuring” amin’ny mpanao Jazz fa isan’ny ataoko izany, ary tanjoko koa ny hoe manao zavatra ho an’ny kolontsaiko. Mifamatotra amin’ny kolontsaina ny ankamaroan’ny zavatra ataoko.
Inona no teninao faramparany sy hafatrao ho an’ny mpanaraka ary e?
Teneniko matetika hoe mitoera ho “Real” (tena izy) amin’ny zavatra atao. Afa tsy hoe amin’ny zavatra ratsy. Izaho “puriste”, ary ilay “purist” eto tsy hoe “Tsy manao afa tsy Boom Bap” fa midika hoe na inona na inona ataoko dia azo antoka fa tena izy sy hiringiriny.
Izany hoe raha manao “Hardcore” aho ohatra, dia iaraha-miaiky tokoa fa “Hardcore” iny nataoko iny, raha manao “G-Funk” aho ohatra, dia iaraha-miaiky tokoa fa “G-Funk” iny nataoko iny, raha manao “Bounce” aho ohatra, dia iaraha-miaiky tokoa fa “Bounce” iny nataoko iny, na koa hoe raha manao “Trap Music” aho, dia iaraha-miaiky tokoa fa “Trap Music” iny, satria ilay hiringiriny (pure) no nataoko. Ireo milaza hoe ny “Boom Bap no tena Rap”, amiko dia toy ny milaza hoe “Vary sy henan’omby ihany no tena vary sy laoka!” nefa misy ny tongon-kisoa sy voanjobory, na koa akoho rony…
Dia tiavo, sy ataovy amin’ny fo, ary araho saina sy fikarohana ny atao rehetra fa aza tia mitsimpona sy mizara fako. Dia misaotra betsaka nanome fitenenana, ho an’olona somary be resaka izay, fa mahafinaritra ny mizara zavatra; sy mametraka lova ho an’ny mpandimby; ary mampahafantatra ny mpanaraka.
Affichage du Contenu en 1,539,866,110.244 seconde(s) avec 92 requêtes SQL